Showing २३१-२४० of ९५५ items.
हिनताग्रन्थीको उपज हो : केकबारे अनर्गल प्रचार
सन्दर्भ : गएको फागुन ११ गते सङ्घीय सरकारको प्रमुख, देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंचाइ, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रका कार्यक्रमहरू लिएर आफ्नो पुर्खौली थलोमा पुग्नुभयो । यसक्रममा उहाँले पाँचथरको १३.७ किलोमिटर उचाइमा रहेको जिल्लाकै सर्वाधिक विकट गाउँ यासोकमा ३२ सय घरपरिवार लक्षित खाने पानीको भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्थापन कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । तमोर करिडोर सञ्चालनमा आएसँगै तेह्रथुमको आठराइबाट ताप्लेजुङको साँघुसम्म पुग्ने ६५ किलोमिटर पक्की बाटो निर्माणकार्यको शिलान्यास गर्नुभएको छ । तेह्रथुमका दूरदराज प्रभावित क्षेत्रका लागि नेपाल बैङ्कको १ सय ७७ औँ शाखा उद्घाटन गरी कार्यारम
७०७ पटक पढिएको
पहिलो प्रश्न यहीँनेर उठ्छ, यदि मान्छेले गीत गाउन छोड्यो भने के हुन्छ ? हामीले युगौं लगाएर खोपेको सामाजिक सौन्दर्य कस्तो देखिन्छ? अनेकन उत्तरहरुको एउटै गाँठो हुन्छ, मृत समाजको श्मसानयात्रा । यो मृत्युले पहिलो घातक प्रहार मानवचेतना र बोधमाथि गर्दछ । अनि बाँकी अवशेष भनेको त गन्हाउने सिनो मात्र हो । प्रकृतिको अनेक रङ, रुप, लय–विलयको केन्द्रमा उभिएर मान्छेले जुन गीत गाउँदै आएको छ, त्यसले मान्छेलाई अझ विवेकी बन्दै थप जिम्मेवारीहरु दिएको छ । मान्छे यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन । तर, कहिले काहीत्यहिमान्छेबाट यति अनपेक्षित कार्य भइदिन्छ कि गाउँदै आएका सारा गीतहरु एक ध्वनि प्रदूषण सिवाय केही लाग
शहीदको शहादत सोध्दै खोज्दै
आफ्नो घरमा फोन थिएन, त्यसबेला । हुसाडेक नेपाल नामको गैह्रसरकारी संस्थामा फोन गरी मेरो सोधीखोजी भएछ । मैले प्रत्युत्तर फोन वार्ता गरेँ । एउटा सानो लेखनवृत्तिको परियोजना मलाई दिन लागिएको रहेछ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बाट । मेरो अनुमानअनुसार मुकुन्द कट्टेल दाइको सिफारिसमार्फत् त्यो परियोजना मलाई मिलेको थियो । मैले लेखनवृत्ति सहर्ष स्वीकार गरेँ । त्यो बेला बेरोजगार पनि थिएँ । एउटा सानो आवधिक रोजगारी प्राप्त भयो । तर, सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष चाहिँ देश र जनताको मुक्तिका लागि बलिदान हुने शहीदको बारेमा सोधीखोजी गर्ने अवसर थियो त्यो । यो अवसर बडो चुनौतीपूर्ण पनि भएर आफूसम्मुख उप
नेपालमा वि.स. ०७२ मा संविधानमा राज्यलाई “समाजवाद उन्मुख” भनेर उदार लोकतन्त्रवादी, वाम लोकतन्त्रवादी, कम्युनिष्ट लोकतन्त्रवादी र कडा रुझान राख्नेका बिचमा साझा वाचा राजनीतिक दलहरूले गरे । यो साझा वाचा गरिनु सकारात्मक पाटो थियो तर रोचक, रोमान्स र अनौठो पनि । किनभने, केही शक्तिहरू “सङ्घीयता सहितको समाजवाद” को वकालत गरिरहेका थिए । तर, कस्तो प्रकारको समाजवाद भन्नेबारेमा निक्र्यौल गर्न सकेका थिएनन् । अझै यो विचारले टुङ्गो पाउन सकेको छैन । अर्थात् “संविधानमा सोलोडोलो समाजवाद उन्मूख व्यवस्था” भनेर लेखिए पनि समाजवादको बारेमा बहस र छलफल पर्याप्त हुन सकेको छैन । माक्र्
कहिले बन्छ प्रदेश १ को पर्यटन नारा?
‘पर्यटन नारा’ शब्द सुन्दा सामान्य लाग्छ । यसको अर्थ भने गम्भीर हुन्छ । पर्यटन नाराभित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गरिरहेको कुनै पनि देश, प्रदेशको पर्यटनको अनुहार देखिन्छ । पर्यटन नाराले पर्यटन ब्रान्डको सुन्दर झल्को दिन्छ । कुन देश र कुन प्रदेश के बेच्न चाहन्छ भन्ने कुरा पर्यटन नारामा आउँछ । पर्यटनमा कसको कुन ब्रान्ड हो भन्ने कुरा पर्यटन नारामा आँउछ । उदाहरणको लागि मलेसियाको पर्यटन नारा छ– ‘मलेसिया ट्रुलि एसिया’ । अर्थात् मलेसिया सच्चा एसिया । युरोप नजिकै अवस्थिति भएको मलेसियाले एसियाको एक विशाल अनुभव लिने भेन्यु आफ्नो देश भएको भन्दै यस्तो नारा बेचिरहेको छ । भुटानको नार
धुमधामका साथ मनाइन्छ शिवरात्रि
नेपाल विभिन्न चाडपर्वले भरिएको देश । विभिन्न समयमा मनाइने नेपाली चाडपर्वहरूको आआफ्नै विशेषता छ । यी चाडपर्वहरूले मानिसहरूलाई स्फूर्ति र आनन्द दिने गर्दछ । सधैंभरिको काम र बेफुर्सदीबाट आक्रान्त भएका मानिसहरूलाई यसले पुर्नजागरण दिने गर्दछ । त्यसैले त अधिकांश नेपालीहरूलाई यी चाडपर्वहरूको व्यग्र प्रतीक्षा रहेको हुन्छ । सबैले आआफ्नो हिसाब र सामथ्र्य अनुसार यी चाडवाड मनाउने गर्दछन् । अन्य बेला भेटघाट नभएका व्यक्तिहरू चाडबाडका अवसरमा भेट्ने, एकापसमा रमाइलो गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । नेपालमा चार किसिमका रात्रिहरूलाई महत्वपूर्ण रात्रिको रूपमा लिइन्छ । यिनीहरूको धार्मिक महŒव पनि रहेको पाइन्छ । ती र
राजनीतिक पहुँच र बलात्कार
बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या जस्ता समाचार सुनिन्छ, पढिन्छ । घटनालाई सम्बोधन गर भनेर प्रतिक्रिया आउँछन् । कोही कसैको प्रतिक्रिया बाहिर देखिएन भने अनेक थरी टिप्पणी हुन्छन् । कानून दह्रो भएन भन्ने पीडा व्यक्त गर्छौं । सीमित प्रतिक्रियापछि हामी चुप लाग्छौं । अर्को घटना घट्यो भने प्रतिक्रिया दिन तयार भएर बस्छौं । यो क्रमले केही समयदेखि निरन्तरता पाइराखेको छ । हिंसा जहिले पनि शक्ति बढी हुनेले कम हुनेमाथि गर्छ । चाहे त्यो शारीरिक शक्ति होस् वा आर्थिक, सामाजिक, महिलामाथि हुने हिंसाको चुरो कारण त्यही हो । समाजमा विभिन्न मूल्य मान्यताका आधारमा पुरुषलाई अत्यन्तै शक्तिमान् बनाइएको छ । महिलामाथि हिंसा पुरु
प्रकाशित मितिः फाल्गुन ८, २०७६
भरखरै बितेको फागुन १ गते देशव्यापी जनयुद्ध दिवस मनाइयो । पूर्व माओवादी पार्टीबाट अलग भएका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द समूहहरूले पनि आफ्नो साङ्गठानिक गच्छे अनुसार मनाए । एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा कार्यकर्ताहरूमध्ये कसैले मन नलागी नलागी लोकाचारको लागि भए पनि मनाए भने कसैले एक गौरवमय इतिहासको शुरुवाती पल ठानेर मनाए । २०५२ साल फागुन १ गतेका दिन तत्कालीन नेकपा माओवादीले रोल्पाको हलेरी, रुकुमको आठबीशकोट, सिन्धुलीगढीको प्रहरी चौकी र गोरखा च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैङ्क कब्जा गर्दै जनयुद्ध शुरुवात गरेको थियो । अब ती दिन बितेर गए पनि निरन्तरताको क्रममा जसरी भए पनि २
नेपालको प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७ को सन्दर्भमा
कुनै पनि विश्वभरिका राष्ट्रहरू स्वतन्त्र हुनु अगावै त्यस देशका जागरुक र स्वतन्त्रता प्रेमीवर्गका अगुवाइहरूले मुलुकमा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न र राष्ट्रलाई सैनिक शासन, जहानियाँ शासन र एकदलीय कुशासनको विरुद्ध गुप्तरूपले संस्था खोली त्यसैको माध्यमबाट जनतालाई क्रुर शासन र बर्बरताको विरुद्ध पर्चा पम्लेट र साना साना लुकी छिपि गरिने कोणसभा, बैठक, सभा गरी विस्तारै जनतामा प्रचार प्रसार गरी स्वाधीन राष्ट्र बनाउन प्रयत्न गरेको इतिहासबाट देखिन्छ । त्यस्तै हाम्रो देशमा १०४ वर्षको जहाँनियाँ राणा शासन विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै प्रजापरिषद् नामक संस्थाले राणा शासनको नालीबेली जनता समक्ष पर्चा पम्प्लेट र कोठे स
विक्षिप्त लिम्बुवानको एउटा कहानी
विद्यार्थी राजनीतिमा छँदा सिके प्रसाईँ (भरतबाबु)ले प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तबारे इलामको सिङ्फ्रिङ्मा सुनाउँदा मेरो युवा जोस पुलकित भई शरीरका हरेक नशाहरू तात्तिएका थिए, २०४६ को मध्यतिर । पञ्चायत कायमै थियो, क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीति गर्दा अलिक अनजानवश झैं थिए हुँला नजरमा तर योभन्दा पहिले २०४२ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनावमा एउटा पञ्च र २०४३ सालको गाउँपञ्चायतको प्रधानपञ्च चुनावमा एउटा पञ्चलाई हराउने चलखेलहरू खेली सकेको थिएँ, युवाक्रान्ति चेतमा । हो वास्तवमा मेरो परिवार, जन्मँदै बहुदलवादी, पञ्च इतरका थियौं । यसैक्रममा इलाम क्याम्पसको विद्यार्थी राजनीतिमा पनि पञ्च इतरमै काम गर्